Dhulgariir xooggan oo ku dhuftay dalka Japan | Xaysimo
Home War Dhulgariir xooggan oo ku dhuftay dalka Japan
Dhulgariir xooggan oo ku dhuftay dalka Japan
Boqol qof iyo dheeraad ayaa ku dhaawacmay dhul-gariir xoogan oo ku dhuftay meel ka durugsan xeebta Fukushima ee dalka Japan.
Dhul-gariirkan oo xoogiisu ahaa 7.3 ayaa aad looga dareemay Tokyo laakiin digniin Sunaami lama soo saarin.
Dhul-gariirkani wuxuu dhacay qiyaastii toban sano ka dib dhul-gariirkii Sunaamida sababay ee ay ku dhinteen 18,000 ee qof.
Sunaamidii waagaasi waxay dhaawac gaadhsiisay warshadda korontada nukliyeerka ee Daiichi ee ku taal Fukushima, khasaarahaas oo noqday kii ugu xumaa ee nukliyeer tan iyo masiibadii ka dhacday Chernobly 1986.
Muuqaal la duubay kolkii dhul-gariirku dhacayey
Dhul-gariirkani wuxuu dhacay qiyaastii 23:08 habeenimo xiliga Japan, waxaanay xuduntiisu ahayd badda dhexdheeda meel berriga u jirta 60 km.
Guryo lagu qiyaasay ilaa hal milyan oo guri ayaa laydhku ka go’ay, waxaana joogsaday tareennadii. Laalkiin ilaa haatan ma jiro wax khasaare ah oo laga soo sheegay oo gaadhay warshadaha nukliyeerka.
In kasta oo ay saraakiishu dadka niyadda u dejinayaan, hadana dad badan oo ku nool xeebaha ayaa guryahooda ka qaxay oo u baxay dhulka sare ee buuraleyda ah, sida ay ku soo warantay wakaaladda wararka Kyodo ee dalka Japan.
“Xataa hadii nalagu yidhaahdo waxba ha ka biqina ma dhacayso Sunaamiye, ka rumaysan maayo” ayuu yidhi nin 50 jir ah oo wakaaladda la hadlay. “Waayo aragnimadii qadhaadhayd ee 10 ka sano hor aan u soo taagnaa ayaan wax ka bartay waana sababta aan uga baxayo gurigayga ee aan dhulkaa sare ee taagga ah ugu baxayo”.